Nametra-pialàna Ny Filoha Lefitr’i Goatemalà, Mitohy Ny Fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Nametra-pialàna Ny Filoha Lefitr'i Goatemalà, Mitohy Ny Fihetsiketsehana
Voadika ny 11 Mey 2015 2:56 GMT
Vakio amin'ny teny Español, čeština , English
Roxana Baldetti, Filoha-lefitr'i Goatemala nametra-pialàna. Sary avy amin'ny Nomada.gt, fizakamanana Creative Commons
Nametra-pialàna ny Filoha-lefitr'i Goatemala Roxana Baldetti tamin'ny Zoma 8 May. Noho ny fanadihadiana maha-voarohirohy ny mpiara-miasa aminy akaiky indrindra - izay nandositra ankehitriny – noho ny tranga kolikoly goavan'ny governemanta fantatra amin'ny hoe La Linea no anton'ny fialàny.
Case against La Línea & social movement it inspired represent victory fight against #impunity in #Guatemala @ipinst http://t.co/lGjtTBd0Dm
— Impunity Watch (@ImpunityWatch) May 8, 2015
Maneho ny fandresen'ny tolona amin'ny tsimatimanota ao Goatemala ny raharaha hanenjehana an'i La Linea & hetsika sosialy naterak'izany.
Notarihan'ny Vaomiera Iraisampirenena Miady amin'ny tsimatimanota (ICAI) ny fanadihadiana momba ny La Linea - nantsoina toy izany noho ny toa fisian’isa manokan'ireo olona mifankafantatra tsara afaka maiala amin'ny adidy fandoavana fadin-tseranana amin'ny fanafarana entana. Rafitra miady amin'ny kolikoly ao Goatemala ny ICAI izay tohanan'ny Firenena Mikambana, ary miezaka manavotra ny andrim-panjakan'ny firenena sy mandrava ilay antsoina hoe rafi-pahefana “mirazotra”.
Nanao diabe ny olom-pirenena Goatemalteka vao haingana mba hitaky ny fialàn'ny mpitondra ambony ao amin'ny firenena, ary niteraka saina te hifety sy be fanantenana tao amin'ny tambajotra sosialy ny fanambaram-pialan'i Baldetti. Naharitra 23 andro ny hetsika nanery ny fialany, araka ny voalazan'ny fizotran-tantara novokarin’ny tranonkalam-baovao nomada.gt.
Namarana ny tatitra momba ny fametra-pialàna tamin'ny fanamarihana toy izao ny Nomada.gt
La primavera guatemalteca llegó! una de las consignas en las calles de Guatemala. Población busca dimisión de OPM pic.twitter.com/vdkBFli4F6
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) May 9, 2015
Iray amin'ireo teny faneva eny an-dalamben'i Goatemala ny “Tonga ny Lohataonan'ny Goatemalteka”. Mitaky ny fialàn'ny Filoha Otto Perez ny vahoaka.
Mazava loatra, ho an’ny ankamaroan'ny Goatemalteka, tsy ampy ny fialàn'i Baldetti. Mitaky izy ireo mba henjehina sy melohina izy sy ireo olon'ny governemanta voarohirohy tamin'ny raharaha La Linea sy amin'ny raharaha hafa.
Ary satria an-jatony ireo hanao fihetsiketsehana eny an-dalambe androany, ho mafampàna ny amin'ny herinandro ambony manoloana ny fifampiraharahana henjana ara-politika mikasika izay hisolo ny Filoha lefitra.
Mitranga izany rehetra izany satria eo am-panomanana ny fifidianana amin'ny Novambra ao anatin'ny fotoana mahatandindonin-doza ara-politika sy ara-toekarena ny Kongresin'i Goatemala - tena hoe “Kongresy ao anatin'ny Fampielezan-kevitra”.
Let the resignation of #Baldetti be the start of structural changes in #Guatemala
— Anna Sandoval (@AnnaSandovalG) May 9, 2015
Aoka ny fialàn'i Baldetti ho fanombohan'ny fanovana rafitra
Ankoatra ny ICAI, ny hery tao ambadiky ny fandroahana an'i Baldetti dia ny taranaka tanora Goatemalteka eo ampisandratana mavitrika sy mitsikera, maro amin'izy ireo no teraka tamin'ny fotoanan'ny filaminana sy ny demokrasia, izay vonona hanampy fototra sy dika amin'ny dikan'ny teny.
Raha manao fandresen-dahatra miafina ao anaty efi-trano mikatona ny fampahalalam-baovao mahazatra voakolikoly sy ireo vato nasondrotry ny tany maintimolaly, dia vonona hidina an-dalambe sy hitaky ny mangarahara, fandraisana andraikitra ary fiovana marina hoan'ny rafitra ara-politika tsy mivoatra ity taranaka tanora ity.
Noho izany, satria mieritreritra hifantina Filoha Lefitra telo avy amin'ny natolotry ny mpanatanteraka ny kongresy, dia sarotra tanteraka ny toe-draharaha ara-politika ao Goatemala.
Mampanontany zavatra maromaro ny fialàn'i Baldetti manokana : Hahavita hifaninana amin'ny fifidianana hoavy ve izay vaovao voatendry? Inona no hitranga raha miala ny filoha ankehitriny, noho ny fitakiam-bahoaka? Mety hisy fifidianana filoham-pirenena mialoha ve ao anatin'izao toe-javatra ara-politika vaovao izao? Hahavita handositra ny firenena miaraka amin'ireo fananany ve i Baldetti, handositra sazy ihany koa?
Political status quo is in flux in #Guatemala, and could be new precedent if #Baldetti is prosecuted: @martin_guate https://t.co/NP4wBlORtJ — Benjamin Reeves (@bpreeves) May 8, 2015
Ao anatin'ny fiovana tanteraka ny politika ao Goatemala; ary mety ho maodely vaovao raha miakatra fitsarana i Baldetti
Pedir que solo salga #Baldetti es pedir Olvido y Perdón a las élites parasitaria que se enriquece de la evasión pic.twitter.com/iY7tnCOjbB
— C P R . U r b a n a (@puebloresiste) May 6, 2015
Ny fangatahana fotsiny ny fialàn'i Baldetti dia toy ny mangataka ny hanadino sy hamela ireo sangany katsentsitra vato nasondrotry ny tany nangoro-karena tamin'ny alalan'ny fandosiran-ketra
Congress will choose new VP from a list of 3 that will be prepared by Prez @ottoperezmolina. — Phil Neff (Version) (@cascadiasolid) May 9, 2015
Hisafidy Filoha Lefitra vaovao avy amin'ny lisitra 3 ho atolotry ny Prez ny Kongresy
If #Guatemala Congress approves VP resignation she will lose immunity for prosecution. #CasoSAT #CasoLaLinea #BaldettiRenuncia (3/3)
— NISGUA (@NISGUA_Guate) May 9, 201
Raha mankatò ny fialàn'ny Filoha Lefitra ny Kongresy ao Goatemala; dia tafala ny tsy fahazoana misambotra azy ka hotsaraina izy
Namoaka vaovao ny tambajotra fa efa voafafa ny kaonty Twitter-n'i Roxana Baldetti:
Baldetti ya desapareció de Twitter, que no desaparezca también de Guate! #ArraigoABaldetti pic.twitter.com/Rbr7ow2PHh
— flaka (@flakitasamayoa) May 9, 2015
Niala tao amin'ny Twitter i Baldetti, tsy avelantsika handositra ny firenena izy
Ho mafampàna ny amin'ny volana ambony mikasika ny hoavin'ny firenena Amerikana Afovoany madinika sy ao anatin'ny korontana. Manantena ny Goatemalteka fa ny fiovana rehetra dia fiovana ho amin'ny tsara.